resource - Synonyms of resource | Antonyms of resource | Definition of resource | Example of resource | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for resource
Top 30 analogous words or synonyms for resource
အမြင်သစ်ပညာရေး သို့မဟုတ် ဘဝဗဟိုပြုပညာရေး - ဖတ်စာအုပ်သည် အဓိကမဟုတ်၊ သင်ကြားမှု သင်ယူမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် မည်သည့် Resource များကိုမဆို အသုံးပြု နိုင်စေရမည်
ကေအမ်ဒီ New Century Resource Centre, Botahtaung Pagoda Road, Between Kannar Street & Merchant Street, Botahtaung TSP, Yangon.
ဒိုမိန်းအမည် အောက်ပါဥပမာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် URL(Uniform Resource Locator) တစ်ခုနှင့် domain name တစ်ခုကြားခြားနားချက်များကို သိနိုင်ပါတယ်။
ကေအမ်ဒီ New Century Resource Centre, 80 Street, Between 34th & 35th Street, ChanAyeTharSan TSP, Mandalay.
မကွေးတက္ကသိုလ် အမျိုးသားပညာရည်မြင့်မားရေး စီမံကိန်းအရ Computer Training Centre, Electronic Resource Centre, Language Laboratory, E-education Learning Centre, နှင့် Multimedia Lecture Room များ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသည်။
ဟဲဗီးမက်တယ်လ် ဂီတ David Hatch နှင့် Stephen Millward, အဆိုအရ Black Sabbath နှင့်တီးဝိုင်းတော်တော်များများသည် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာကြသည်။ အမျိုးအစား၏ဇစ်မြစ်သည် blue ဂီတနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ လိင်ကိစ္စသည် အခြားအရေးကြီးသော အကြောင်းအရာဖြစ်ကြောင်း Led Zeppelin ၏ စာသားများတွင် တွေ့ရသည်။ ဂီတဝေဖန်ရေးသမားများက metalစာသားများသည် ငယ်ရွယ်သူများနှင့် သက်ဆိုင်၍ သာမန်မျှသာဖြစ်သဆည်ဟု ဆိုသည်။ Tipper Gore တည်ထောင်ထားသော Parents Music Resource Center (PMRC) က မိန်းမမုန်းတီးရေးကို ထောက်ခံသည် ဟုဆိုသည်။ ခက်ခဲနက်နဲသည် ဟုလည်းဆိုသည်။ ကန့်ကွက်ငြင်းဆိုသော စာသားများထုတ်ဖော်သည့် အုပ်စုများကြောင့် လူကြိုက်များသည့် စက်မှုဇုံကို စည်းမျဉ်းကျစေရန် ဆွေနွေးကြသည်။ အထူးသဖြင့် heavy metal song များပါဝင်သည်။
အလောင်းတော်ကဿပ အမျိုးသားဥယျာဉ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မရှင် နှင့် ပြည်တွင်း NGO အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော FREDA (Forest Resource and Environmental Development and Conservation Association)၊ ထို့ပြင် Wildlife Alliance စသောအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ အလောင်းတော်ကဿပ အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် ယခုအခါ သမင်၊ ဒရယ်စသော တောတွင်းနေသတ္တဝါများ တရားမဝင်ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်နေမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်အကြီးအကျယ်လုပ်ဆောင်နေရသည်။ ထို့ပြင် အလောင်းတော်ကဿပ အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် မြန်မာ့သစ်ခွများပေါကြွယ်ဝမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသောနေရာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ရာ သစ်ခွမုဆိုးများ၏ မြန်မာ့သစ်ခွ မျိုးရိုင်းများ ခိုးထုတ်နေမှုဒဏ်ကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် စက်မောင်းစနစ် (operating system), OS, သည် ကွန်ပျူတာတွင် software အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှု (activity) နှင့် ကွန်ပျူတာ ရင်းမြစ် (resource) များကို တာဝန်ခံရန် တာဝန်ရှိသည်။ စက်မောင်းစနစ် တွင် application များကို ထိန်းသိမ်းပြီး စက်ကို မောင်းနှင်သည်။ စက်မောင်းစနစ်သည် hardware များ၏ လုပ်ဆောင်မှု ကို ကိုင်တွယ်ရန် အိမ်ရှင် လုပ်ရသည့် သဘောဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် application များသည် hardware များ၏ လုပ်ဆောင်ပုံ အသေးစိတ်ကို ကြိုတင် သိရှိရန် မလိုတော့ပေ။ ကွန်ပျူတာများအားလုံး လက်ကိုင် ကွန်ပျူတာ (handheld computer)၊ စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာ၊ စူပါ ကွန်ပျူတာ များသာမက ဗွီဒီယို စက်များပင် စက်မောင်းစနစ် တစ်မျိုးမျိုး သုံးကြသည်။ ရှေးကျသော စက်များတွင် အသေပိတ် စက်မောင်းစနစ် (embedded operating system) ကိုသုံးသည်။